Android terminal များတွင် developer ရွေးချယ်မှုများကိုသက်ဝင်စေသည် Androidsis
အတွက်စံအဖြစ်အကောင်အထည်ဖော်သောအရာတစျခု အန်းဒရွိုက် operating system ကို, developer များသို့မဟုတ်ပိုမိုလူသိများအတွက်အထူးချိန်ညှိမီနူးမှဝင်ရောက်ခွင့်သည် developer ရွေးချယ်စရာ, ထို မှနေ၍ ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သောအရေးကြီးသောရွေးချယ်မှုများကိုလုပ်နိုင်သည် USB debugging.
၎င်းကိုစံအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းသည်အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်ပထမဆုံးကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းကိုမဆိုလိုပါ။ ဒါကြောင့်လာမယ့် post မှာငါရှင်းပြပါလိမ့်မယ် ထိုရွေးချယ်မှုများကိုမည်သို့သက်ဝင်ရမည်နည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ချိန်ညှိချက်များမှတစ်ဆင့်၎င်းတို့ကိုရရှိနိုင်သည် Android စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်.
1 Developer options menu မှကျွန်ုပ်တို့အဘယ်အရာကိုရယူနိုင်ပါသနည်း။
2 Development options menu ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ။
Developer options menu မှကျွန်ုပ်တို့အဘယ်အရာကိုရယူနိုင်ပါသနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြင့်သက်ဝင်နိုင်သည့်ဤလျှို့ဝှက်မီနူးမှအထူးရွေးချယ်စရာများကိုရယူနိုင်သည် Android developer များ။ အဖြစ်အရေးကြီးသောရွေးချယ်စရာ USB debugging ကို enable လုပ်ပါUSB မှတ်ဉာဏ်ကိုကာကွယ်ခြင်း၊ မျက်နှာပြင်ကိုတက်တက်ကြွကြွထားခြင်း၊ simulated တည်နေရာများကိုခွင့်ပြုခြင်း၊ debugging အတွက်လျှောက်လွှာကိုရွေးချယ်ပါ၊ ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထိတွေ့မှုကိုပြသည်သို့မဟုတ် pointer ၏တည်နေရာကိုပြပါသို့မဟုတ်ကာတွန်း၏အမြန်နှုန်းကိုပင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဒီ menu ကနေပြီး Android သုံးစွဲသူများအတွက်စကားပြောခြင်းဖြင့်၊ အထက်ပါဖော်ပြချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်ပါတယ် USB debugging အရာအောင်မြင်ရန်နိုင်ဘို့ဥပမာများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည် ROOT ဒီနေ့ခေတ် Android ဆိပ်ကမ်းများစွာမှာ
Development options menu ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ။
မီနူးကိုသက်ဝင်စေဖို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရွေးချယ်စရာများ u အဆင့်မြင့် options များကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ၏ setting menu နှင့်၎င်းကိုပြောသည့်နေရာ၏အောက်ခြေတွင်သာကျွန်ုပ်တို့သွားရမည် ကိရိယာအကြောင်းTerminal model ပေါ် မူတည်၍၊ Tablet၊ ဖုန်းသို့မဟုတ်အလားတူရွေးစရာများအကြောင်း၊ ခေါ်သည့် option သို့ scroll လုပ်ပါ နံပါတ်တည်ဆောက် ၎င်းကိုတစ်ကြိမ်တွင်ခုနစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။ အလိုအလျောက်ပြန်သွားပါကသက်ဆိုင်နေသောကိရိယာ၏ဆက်တင်မီနူး၏ပင်မမျက်နှာပြင်သို့ပြန်သွားပါကခေါ်ဆိုထားသောဤရွေးစရာအသစ်ကိုရှာနိုင်သည် developer ရွေးချယ်စရာ, Developer ရွေးချယ်စရာများသို့မဟုတ်ပင်အဆင့်မြင့် options များ။
သင်တို့အများစုသည်ဤ post သည်ရှင်းလင်းချက်အတွက်မလိုအပ်သောရိုးရှင်းလွယ်ကူမှုကြောင့်ယုံကြည်သော်လည်းငါကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ထံလာသည့်တောင်းဆိုမှုများကိုရေးသားရန်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Androidsis လူမှုကွန်ယက်များ သူတို့ကအဲဒါကိုဘယ်လိုအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုမေးတယ်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - Cyanogenmod installer ကိုယခု download လုပ်နိုင်ပါပြီ
ပြီးတော့ Samsung samsung galaxy2မှာ developer ociones ကိုဘယ်လိုဖုံးကွယ်မလဲ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာလက်စွဲစာအုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Samsung Galaxy Young ရှိပါတယ်။ ငါစုဆောင်းတဲ့နံပါတ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာအဲဒါကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ အကြိမ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်၊ တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုသဲလွန်စပေးနိုင်ပါတယ်
ငါ၎င်းကိုလိမ္မော်ရောင် roya ၌ exo လုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပျော်ရွှင်သော USB အားကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်အခြားအရာများပေါ်တွင်တင်ရန်ကျွန်ုပ်အားထားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်အရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ပြီးပြီ၊ တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီသည်။
Alejandra Franchini ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းသည်ပြန်လည်စတင်နေပြီး developer ရွေးချယ်မှုများကိုဘယ်တော့မှမဖွင့်ပါ။ အခြား rom ကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲ။
Alejandra Franchini အားပြန်ကြားပါ